Naya Bikalpa | भोको पेट र लकडाउन: कति दिन धान्ने? - Naya Bikalpa भोको पेट र लकडाउन: कति दिन धान्ने? - Naya Bikalpa
भोको पेट र लकडाउन: कति दिन धान्ने?
प्रकाशित मिती: २०७७ जेष्ठ ९, ०९: ०९: ४६
विश्वरुपी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) कारण विश्वका २१५ राष्ट्रका जनता यतिखेर चिन्ताग्रस्त छन। गत डिसेम्बर महिनादेखि चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको यो महामारीले अहिले ३ लाख बढी मानिसहरुको ज्यान गई सकेको छ भने ४८ लाख भन्दा धेरै संक्रमित भैसकेका छन् । यस्तो भयाबह स्थितिमा हाम्रो मुलुक पनि अछुतो रहेन । यो महामारीको अत्यासलाग्दो कालोबादल कहिले फाट्ने हो कसैलाई पत्तो छैन । विश्वका ठूला ठूला बैज्ञानिकहरु समेत यो महामारीबाट मानव जातिलाई कसरी छुटकारा दिलाउन सकिन्छ भनेर लागि परिरहेका छन् तर पनि कुनै खास औषधि तथा भ्याक्सिन पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । विश्वका ठूला शक्तिशाली राष्ट्रसमेत यो महामारीबाट अत्तालिएका छन् । अमेरिकामा अहिले अन्य मुलुकको भन्दा तिन गुणा बढी मानिसहरुको कोरोनाका कारण मृत्यु भइरहेको छ । यति मानवीय क्षति हुँदा पनि अर्थतन्त्र धरासाही होला भन्ने डरले उसले लकडाउन नीति अपनाएको छैन । नियम अनुसार सबै ठाउमा सबै कुरा सुचारु भइरहेको देखिन्छ । यसो भनि रहदा अमेरिका र हाम्रो मुलुकलाई एउटै आँखाले हेर्न नमिले पनि अब लकडाउनको विकल्प खोज्ने समय आएको छ ।
लकडाउन सुरु भएदेखि नेपालको सीमा पारी आएर बसेका लाखौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु अहिलेसम्म पनि अलपत्रनै छन् । सरकारले उनीहरुलाई देश प्रवेश गर्ने कुरामा आजभोली आजभोली भन्दै अल्मल्याई रहेको छ भने तिनै अलपत्र परेकाहरु रातको अँध्यारोमा सिमा पार गरिराखेका छन। तिनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नेपालमा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । केहीलाई देशभित्र भित्राएर क्वारेन्टाइनमा राखेता पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको राम्रो हेरचाह नभएको कारण नेपालगंजका एक युवकले ज्यान समेत गुमाए । संक्रमितलाई समयमै आवश्यक औषधि गरेर अस्पतालमा व्यवस्थित गरेर राख्न सकेको भए बचाउन सकिने तथ्यहरु यस भन्दा अगाडि घटेका घटनाहरुले देखाई सकेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि जनताको ज्यान बचाउन लागि परेका हाम्रा स्वास्थकर्मीहरु नेपाली आमाका सच्चा सपुत हुन् । कोरोनाको कहरसँगै सिन्धुपाल्चोककी एक सुत्केरी महिलाको कोरोना कै कारण मृत्यु भयो । उनले आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिएको ९ दिन मात्र भएको थियो । बच्चा जन्मिएको भोलिपल्टै उनलाई काठमाडौंदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म लैजादा अपनाउन पर्ने स्वास्थ्य सजकता नअपनाएको कारण निकै रगत बगेको समाचार पनि आय। सुत्केरी अवस्थामा आइपर्न सक्ने स्वस्थ समस्या बारे जानकारीको कमि र त्यस्तो बेलामा तुरुन्त उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अभाबले पनि नेपालमा मातृ मृत्यु दर निकै बढी छ । त्यसैले ती सुत्केरी महिलाको मृत्यु खोजिको बिषय बनेको छ।
कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेको झन्डै दुई महिना वितिसक्दा पनि पर्याप्त रुपमा परीक्षण गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। अन्य देशहरुमा कोरोना नियन्त्रण बाहिर गैसकेको बेलामा हाम्रो देश भने अझै चोखै थियो तर दुइ महिना बिव्श्वमा कोरोनाले आक्रान्त पारिसक्दा पनि हाम्रो सरकारले त्यो महामारी नेपालमा पनि भित्रिन सक्छ भन्ने कुरा बेवास्ता गर्दा आजको परिस्थिति आएको हो। समय छदै आवस्यक स्वस्थ सामग्रीको जोहो गर्न नसक्दा आज केहि लाख जनताको कोरोना परीक्षण गर्न सरकार असमर्थ भैराखेको छ जब कि अन्य देशहरुमा एक दिन मै दशौं हजारको संख्यामा परीक्षण भैराखेको छ। तर हाम्रो सरकार अहिलेसम्म कोरोना भाइरस जाँच गर्ने किट ७० हजार चीनले र भारतले दिएको ३० हजार सहयोग मै रमाईरहेको छ । सरकारसँग भएको भनिएको एकलाख किट सुरक्षित राखेर अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको जाँच गर्ने तत्परता देखाइएको छैन । एक हातले सहयोग लिने र अर्को तिर सिमा विवादका कारण भारतलाई गाली गलोज गर्दै हिँडेका कारण खुला सिमानाबाट भारतिय पक्षले नेपाल भित्रिनेलाई रातारात चेकजाच नै नगरी छिराउने प्रयास गरिरहेको छ । यसरी आएका व्यक्तिहरुबाट संक्रमणको जोखिम र संक्रमितको संख्या दुवै बढ्दो छ । अन्य मुलकुमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फर्काउने प्रक्रिया त झन् सरकारको लिस्टमै छैन ।
तसर्थ नेपाली जनताको अभिभावकत्व समाल्न नसकेको अनुभूति आम जनताले गर्न थालेका छन्। यतिखेर नेकपा पार्टी भित्र र बाहिर र सिंगो सरकार प्रति आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ । एमालेमा गाभिन आएका माओवादी नेताहरु बीच नै राजनीतिक कटुता बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले लथालिंग र भताभुंग हुनु अगावै वर्तमान सरकारले उपायहरु खोजि गर्नुको साटो लक डाउनलाई मात्र विकल्प मानेर लकडान माथि लकडाउन थपिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र नेपाली जनतालाई भोक भोकैबाट उन्मुक्ती दिलाउने खोजी कार्यमा लाग्नुको सट्टा सरकार यतिखेर आफ्नै आन्तरिक द्धन्द्ध र सत्ता टिकाउने खेलमा नै समय व्यतित गरिराखेको छ । लकडाउनका कारण दैनिक उपभोग्य समानहरुको अभाब अब देखिन थालिसकेको छ। लकडाउन सँगै घर घरमा रासन पु¥याई दिने ठूला ठूला आस्वाशन त जनताले पाएका थिए तर पुरा भएनन्। सरकारले लकडाउन सुरु भएपछि स्थानीय निकाय मार्फत राहत बाड्न छुट्याएको रकम समेत अहिलेसम्म स्थानीय निकायमा नपुरायेका कारण अब स्थानीय निकायले राहत बाड्न समेत नसक्ने बताउन थालिसकेका छन् जनप्रतिनिधिहरु ।
त्यसैले राहत सामग्री अब केही सिमित हुने खाने समृद्ध परिवार बाहेक मध्यमवर्गलाई समेत राहत प्रदान गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ तर बिना कुनै तयारी, बिना कुनै योजना सरकारले पटक पटक लकडाउनको समय मात्र लम्याई रहेको छ । तर यो दिगो समाधान होइन। अब ठोस योजना र सतर्कताका साथ् लकडाउन बिस्तारै खुकुलो बनाउदै लैजानु पर्दछ। उद्योग कलकारखाना खोल्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। ब्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा अब निम्न वर्ग मात्र होइन मध्यम वर्गका लागि समेत सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नु पर्छ। जनताको जीवन दिनप्रति दिन कष्टकर बन्दै गएकोछ। कसैको पनि भोको पेटले लकडाउन भन्दैन। त्यसैले राजनैतिक झमेलालाई पन्छाएर कोरोना बिरुद्ध सरकार निवार्स्थरुपमा लड्नु पर्छ। संकटका बेलामा जनतालाई सरकार भएको अनुभूति भए मात्र यो बहुमतको सरकारको सार्थकता पाउन सक्छ नत्र भने भोको पेटले लकडाउन स्वीकार गर्दैन।
२०७७ जेष्ठ ९, ०९: ०९: ४६